अस्ट्रेलिया बिरुद्ध भारत (लाइभ र खेलतालिकाबारे सम्पूर्ण जानकारी एकै ठाउँ) - Nepali News Nepal
२७ पौष २०७६ एजेन्सी: अस्ट्रेलिया क्रिकेट टोलिले भारत भ्रमण गर्दै छ। अस्ट्रेलिया र भारतबिचको खेल १४ जनवरी देखि सुरु हुँदै छ ।
दुवै क्रिकेट टीमले आफ्नो क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिसकेको छ । भारत भ्रमण रहेको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टोलीले भारतसँग ३ वटा वनडे सिरिज खेल्ने छ । भारतले पहिलो वनडे खेल १४ जनवरीमा खेल्ने छ । दोस्रो वनडे खेल १७ जनवरीमा र तेस्रो १९ जनवरीमा हुने छ ।
अस्ट्रेलियन टिम: एरॉन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, एलेक्स केरी, पैट कमिंस, पीटर हैंड्सकॉम्ब, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेन, केन रिचर्डसन, डार्सी शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, डेविड वॉर्नर, एडम जाम्पा.
← सिड्नी सिक्सर्ससँगको खेल आज, सन्दिपको प्लेइङ्ग ११ मा पर्ने सम्भावना कति ?
स्पेनिस सुपर कपको फाईनल: एट्लेटिको मड्रिड र रियाल मड्रिड भिड्दै (सम्पूर्ण जनाकारी) →